tanana any texas holdem fitsipika
amin'ny teny hafa ho an'ny mail slots
5 KINTANA iGaming haino aman-Jery nanambara ny Starlet Loka Mpandresy izay BetConstruct efa ekena ho toy ny Tsara indrindra Fantasy Sports Mpamatsy 2018. Amin'ny alalan'ny fanadihadiana ny lalao orinasa BetConstruct hita Fantasy Fanatanjahan-tena toy ny malaza eran-tany ny vokatra, izay manome ny mpilalao fahafahana manana ny tena manokana lalao traikefa. Ho an'ny Fantasy Sports efa lasa fahatakarana lalina kokoa ny mpilalao izay zavatra ilaina ary tonga amin'ny isan-karazany ny vaovao mampiroborobo ny rindrambaiko. Ny mariky BetConstruct Fantasy Sports efa nalaim-panahy ny mpampiasa avy amin'ny maro ny firenena Eoropeana, kanefa isika dia mikasika ny fomba fampivoarana fantasy sport gamezone izay manome ny tena manao ny mpampiasa traikefa eo amin'izao tontolo izao - tanan ' poker texas holdem.
BetConstruct dia nahazo loka developer sy ny mpamatsy aterineto sy tany-monina lalao vahaolana amin'ny fampandrosoana, ny varotra sy ny fanompoana foibe maneran-tany tanana any texas holdem fitsipika. BetConstruct ny zava-baovao sy voaporofo fanatitra ahitana be dia be isan-karazany ny vokatra sy ny tolotra, anisan'izany Sportsbook, Fanatanjahan-tena Tahirin-kevitra Vahaolana, Retail Vahaolana, RNG & Velona Mpivarotra Casino, VR Casino, Poker, ny Fahaiza-manao Lalao, Fantasy Sports, ny Sehatra ara-Tsosialy sy ny maro hafa. Ny vaovao farany koa dia ny orinasa voalohany tanteraka ny fitantanana ny foto-drafitr'asa, SpringBME (Fandraharahana ny Fitantanana ny tontolo Iainana). Mpiara-miombon'antoka rehetra mandray soa avy amin'ny BetConstruct Lohataona sehatra ny mahery vaika indray ny birao sy ny fitaovana rehetra-manavaka ny asa izay hanome hery ny mpandraharaha' ny fivoarana sy hanampy omby ny vola lany.
Avy mijoro irery nanangana ny indray-manan-danja-ny fotsy sy marika vahaolana, BetConstruct manolotra ny mpiara-miasa malalaka fahafahana hahomby amin'ny teny hafa noho ny poker buy ao. Hahazo ny farany filokana vaovao avy any Calvin Ayre amin'ny teny hafa ho an'ny mail slots.